🛷 Toboggan orod | Booqo Hultsfred
Sled, balastarka dabada ama barafka?
Markuu jiro baraf ku filan, waxaa jira dalcado badan oo kala duwan oo ku habboon isboortiga ama barafka. Xidho dhar diirran, boorsadaada ku diyaarso shukulaatada kulul ka dibna u bax orodyada roobaadka.
Buur dheer oo dhererkeedu dheer yahay. Halkan waxaa ku yaal aag hilib lagu dubto iyo nalal. Buurta waa sahlan tahay in gaari lagu gaaro.
Buurta munaaradda biyaha
Jiirada munaaradda biyaha waxay ku taalaa Järnforsen, dhererkeedu waa 225 mitir oo hoos u dhac ah 30 mitir. Laydh ayaa la heli karaa.
Hesjöbacken waa buur cufan oo ku taal meel ka baxsan Målilla Hesjön. Gawaarida la dhigto ayaa la heli karaa bilowga buurta. Iftiiminta iyo aagga dubitaanka diyaarka ah.